Musharax C/kariim Guuleed iyo qaar kamid ah waxgaradka G/dhexe oo kulmay”Sawirro” – Radio Muqdisho
Musharax C/kariim Guuleed iyo qaar kamid ah waxgaradka G/dhexe oo kulmay”Sawirro”
Musharax C/kariim xuseen Guuleed oo ka mid ah musharixiinta u taagan xilka madaxtinimada maamulka gobollada dhexe ee Soomaaliya ayaa maanta kulan la qaatay qaar katirsan odayaasha dhaqanka ee dega gobolladaasi.
Kulankan ayaa waxaa looga hadlay sidii hore loogu sii wadi lahaa maamul u sameynta gobollada Mudug iyo Galguduud iyo sidii beelaha ku nool deegaanku ay u taageeri lahaayeen dadaalada lagu doonayo in maamul ay ku mideysanyihiin dadkaasi uu kasoo baxo shirka ka soconaya magaalada Cadaado ee gobolka Galguduud halkaas oo xiligan ay ku shirsanyihiin ergooyin ka kala yimid degmooyinka iyo gobollada Mudug iyo Galguduud.
Sidoo kale odayaasha uu la kulmay musharax C/kariim Xuseen Guuleed ayaa sheegay inay si wanaagsan u socoto howlaha maamul u sameynta islamarkaana looga baahanyahay dadka deegaanaadas inay taageeraan maamulkan oo ay ku howlanyihiin wasaaradda arrimaha gudaha iyo gudiga farsamada ee dhawaan gaaray magaalada Cadaado.
Mudane C/kariim Xuseen Guuleed oo goobta ka hadlay ayaa ku dheeraaday sida loogu baahanyahay in wax loo qabto dadka ku nool labada gobol oo muddo la daalaa dhacayay dhibaatooyin kala duwan.
Xaflad lagu soo dhaweynayo madaxweynaha Soomaaliya oo caawa ka socota Garowe
R/wasaaraha oo hambalyo ku aaddan maalinta shaqaalaha aduunka u diray dhamaan shaqaalaha Soomaaliyeed